ကလေးရဲ့ဦးနှောက်က လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အတွေ့အကြုံ အမျိုးမျိုးကတဆင့် ဖွံ့ ဖြိုးလာပါတယ်။ အထိ ၊ အတွေ့ ၊ အကြား ၊ အမြင် ၊ အရသာ စတဲ့ အာရုံခံစားမှုတွေကလည်း ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်ကို ကူညီပေးပါတယ်။
အကျင့်ဆိုးတွေကို အမြစ်မတွယ်သေးခင် ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါ
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်က သူရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောချစ်ရတဲ့ သားလေးရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်မောကိုယ်မောဖြစ်နေရပါတယ်။
အသောက်များသွားလို့ ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်စေနိုင်မယ့် အချက် (၆) ချက်
TGIF တွေ TGIS တွေမှာ သောက်ပြီးလို့ တနင်္ဂနွေဆို ပြဲကွဲနေပြီလား အဲလေ မထနိုင်ဖြစ်နေပြီလား?… သောက်တာလည်း မများဘဲ အရက်နာများ ကျနေကြပြီလား? တနင်္လာ အလုပ်သွားဖို့ရော ထနိုင်မှာ ကျိန်းသေရဲ့လား? မပူပါနဲ့…
ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေအတွက် အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးနေကျ ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ကင်္ကသူရဲ့ စန္ဒသူရိယ နက္ခတ္တဝေဒ ဟောစာတမ်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။